Madaxda Maamulladu maka jawaabi doonaan baaqyada loo diray? | KEYDMEDIA ONLINE
Madaxda Maamulladu maka jawaabi doonaan baaqyada loo diray?
Madaxda Muumullada, ayaa doorashada dib ugu dhigaya, dano gaar ah, oo ay ugu horreyso mid siyaasadeed iyo helidda dhaqaalo ku dhaca jebkooda billaabashada doorashada ka hor.
MUQDISHO, Soomaaliya – Sanad dib u dhac ah kadib, shalay ayay ahayd markii guddiga maamulka doorashada kuraasta Somaliland (SEIT), uu caasimadda ka iba-fuay doorashada kuraasta Golaha shacabka, markaas oo teendhada afisyooni lagu doortay kuraasta HOP237 iyo HOP239, oo ay ku soo kala baxeen Mahdi Guuleed Khadar iyo Biixi Iimaan Cige.
Iyaga oo ka duulaya daahfurka doorashada, Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka Heer Federaal, ayaa Madaxda Maamul gobolleedyada ugu baaqay in ay billaabaan doorashada kuraasta Golaha shacabka ee baarlamaanka 11-aad ee JFS.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble, ayaa sidoo kale, hoggaamiyayaasha shanta dowlad gobolleed ka codsay in la guda galo doorashada Aqalka hoose, si dalka looga saaro firaaqa dastuuriga ah.
Golaha Midowga Musharixiinta, Ururrada bulshada rayidka iyo Wakiillada Beesha Caalamka, ayaa dhankooda Hoggaamiyayasha hore ugu boorriyay in si deg deg ah, loo billaabo loona soo gunaanado doorashada Aqalka hoose.
Hayeeshee, Madaxweynahaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka, oo ku dhawaad afar bilood ku guuldareystay in ay soo afmeeraan doorashada Aqalka sare, ayaa u muuqda kuwa dano siyaasadeed dib ugu dhigaya doorashada kuraasta Golaha shacabka.
Maamullada Jubballand iyo Koofur galbeed, oo dhowr jeer hore u sheegay in ay billaabayaan doorashada ayaan wali la heyn, halka Galmudug oo xasarado ka aloosan yihiin, Hirshabeelle oo inta badan madaxdeedu Muqdisho deggan yihiin iyo Puntland oo doorashada siyaasadeyneysa aysan bishan November diyaar u ahayn guda galidda doorashada Golaha Shacabka.
275 kursi oo mid kasta ay ku tartami doonaan ugu yaraan labo musharrax, ayaa hore loo go’aamiyay in baratame kasta oo Lab [Rag] ah uu bixiyo $10,000 oo dollar, halka musharrax kasta oo haween ah laga doonayo $5000, oo dollar, taas oo la micno ah in marnaba doorashadu aysan u xirneyn dhaqaalo la’aan ee dano siyaasadeed ay dib ugu sii dhacceyso.
Dhawaan, qorshaha howlgalka doorashada, waxaa lagu caddeeyay in cod-bixinta doorashada kuraasta Aqalka hoose ay socon doonto 20 maalmood, taas oo ka dhigan in 19 maalmood ay baaqi tahay, si looga fogaado dib u dhac hor leh.
Dib u dhaca doorashada ayaa sababtay in dalku galo xaalad hubinti la’aan dhinacyo badan ah, waxaana taagan nuucyada kala duwan ee qanacsiga, oo kala iibsiga dhulku ugu horreeyo, dhismaha ayaa sidoo kale taagan tan iyo dhamaadkii bishii April ee sanadkaan.